ခင်ပွန်းရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ တစ်ချိန်က အမှတ်တရပုံလေးေ တွနဲ့အတူ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ကြာစိရဲ့ဇနီး – Shwe Likes
ဇာတ်သဘင် လော ကမှာ နာမည်ကြီးလှ တဲ့ လူရွှင်တော် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့5stars လူရွှင်ေ တာ်အ ဖွဲ့ဝင်မှ လူရျွင်တော် တစ်ယော က်ဖြစ်တဲ့ ကြာစီကေ တာ့ မရိုးနိုင်တဲ့ ဟာသပြက်လုံးတွေ နဲ့ပရိသတ်ေ တွကိုရယ်မောပျော် ရွှင်အော င်လုပ်ဆောင် နိင်တဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်ေ တွရဲ့အားေ ပးချစ်ခင်မှုကို တစ်ခဲနက်ပို င်ဆိုင်ထားတဲ့သူ တစ်ယောက်ပြဲ ဖစ်ပါတယ်ေ နာ်။
ဒါ့အပြင် လူရွှင်တော် ကြာစိ ကတော့ ချစ်ဇနီးလေးနဲ့ အတူချစ်စရာေ ကာင်းတဲ့ သမီးလေးတစ်ယော က်ကိုလည်း ပိ်ုင်ဆိုင်ထား ပြီးပျာ်ရွှင်စ ရာကော င်းတဲ့မိသားစု ဘဝလေးကိုဖြ တ်သန်းနေတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်ေ နာ်။
ဒီကနေ့ဟာ ဆိုရင် လူရွှင်တော်ကြာ စိရဲ့မွေးနေ ့လေးဖြစ် တာကြောင့် ချစ်ရတဲ့ဇနီးဖြစ်သူက တစ်ချိ န်က အမှတ်တရပုံတွေနဲ့အတူ “ပျော်ရွှင်ဖွယ်ေ မွးနေ့လေး ပိုင်ဆိုင် ပါစေဦးစိတ်ကော က်ရေ……….အသက်လ ည်းကြီးပြီအဘိုးကြီး လည်းဖြစ်ပြီကောက် တာလေးလျော့…….
မချစ်ဘူး ဆိုတာ ချစ်လို့ပြော တာဒါလေးလ ည်း ဒီအရွယ်ရောက်ပြီသိ သင့်ပြီထင်ပါ တယ်နော်…….မွေးနေ့မှစ အောင်မြင်ခြ င်းအေးချမ်းခြင်း ပျော်ရွှင်ခြင်းများမ ဆုံးအောင်ရရှိပြီး ကောင်းကျိုးလို ရာဆန္ဒစိတ်ရှိတိုင်းပြ ည့်ဝပြီး ရန်စွယ်ဟူသမျှအနိုင်ရပြီး ဘဝ တံခွန် အောင်လံလွှင့်ထူနိူင်သူဖြစ်ပါစေ…….” ဆိုပြီးမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိတ်သတ်ကြီးကလည်း ကြာစိရဲ့မွေးနေ့လေးကို ဆုမွန်ကောင်းေ တာင်းပေးခဲ့ပါအုံးေ နာ်….။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိ တ်သတ်တ စ်ယောက် ချင်းစီတိုင်း ကိုအထူး ပဲကျေးဇူးတင် ရှိပါတယ်နော်။ Credit
ဇာတ္သဘင္ ေလာ ကမွာ နာမည္ႀကီးလွ တဲ့ လူရႊင္ေတာ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့5stars လူရႊင္ေ တာ္အ ဖြဲ႕ဝင္မွ လူရၽြင္ေတာ္ တစ္ေယာ က္ျဖစ္တဲ့ ၾကာစီေက တာ့ မရိုးနိုင္တဲ့ ဟာသျပက္လုံးေတြ နဲ႔ပရိသတ္ေ တြကိုရယ္ေမာေပ်ာ္ ရႊင္ေအာ င္လုပ္ေဆာင္ နိင္တဲ့အတြက္ ပရိတ္သတ္ေ တြရဲ့အားေ ပးခ်စ္ခင္မႈကို တစ္ခဲနက္ပို င္ဆိုင္ထားတဲ့သူ တစ္ေယာက္ျပဲ ဖစ္ပါတယ္ေ နာ္။
ဒါ့အျပင္ လူရႊင္ေတာ္ ၾကာစိ ကေတာ့ ခ်စ္ဇနီးေလးနဲ႔ အတူခ်စ္စရာေ ကာင္းတဲ့ သမီးေလးတစ္ေယာ က္ကိုလည္း ပိ္ုင္ဆိုင္ထား ၿပီးပ်ာ္ရႊင္စ ရာေကာ င္းတဲ့မိသားစု ဘဝေလးကိုၿဖ တ္သန္းေနတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္ေ နာ္။
ဒီကေန႔ဟာ ဆိုရင္ လူရႊင္ေတာ္ၾကာ စိရဲ့ေမြးေန ့ေလးျဖစ္ တာေၾကာင့္ ခ်စ္ရတဲ့ဇနီးျဖစ္သူက တစ္ခ်ိ န္က အမွတ္တရပုံေတြနဲ႔အတူ “ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေ မြးေန႔ေလး ပိုင္ဆိုင္ ပါေစဦးစိတ္ေကာ က္ေရ……….အသက္လ ည္းႀကီးၿပီအဘိုးႀကီး လည္းျဖစ္ၿပီေကာက္ တာေလးေလ်ာ့…….
မခ်စ္ဘူး ဆိုတာ ခ်စ္လို႔ေျပာ တာဒါေလးလ ည္း ဒီအရြယ္ေရာက္ၿပီသိ သင့္ၿပီထင္ပါ တယ္ေနာ္…….ေမြးေန႔မွစ ေအာင္ျမင္ၿခ င္းေအးခ်မ္းျခင္း ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ားမ ဆုံးေအာင္ရရွိၿပီး ေကာင္းက်ိဳးလို ရာဆႏၵစိတ္ရွိတိုင္းၿပ ည့္ဝၿပီး ရန္စြယ္ဟူသမၽွအနိုင္ရၿပီး ဘဝ တံခြန္ ေအာင္လံလႊင့္ထူနိူင္သူျဖစ္ပါေစ…….” ဆိုၿပီးေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ပရိတ္သတ္ႀကီးကလည္း ၾကာစိရဲ့ေမြးေန႔ေလးကို ဆုမြန္ေကာင္းေ တာင္းေပးခဲ့ပါအုံးေ နာ္….။ဖတ္ရႈေပးတဲ့ပရိ တ္သတ္တ စ္ေယာက္ ခ်င္းစီတိုင္း ကိုအထူး ပဲေက်းဇူးတင္ ရွိပါတယ္ေနာ္။ Credit
Single ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ အကြောင်း ပရိတ်သတ်တွေ ကို အသိပေးလာတယ် ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် အောင်ရဲလင်းရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေး